Iimbali ezimbalwa ze-Forex zorhwebo; kuxoxwa kunye nobunzima - Icandelo 1 | FXCC
amanqaku asekelwe ngaphambili
Education - Amanqaku kunye tutorials - amanqaku asekelwe ngaphambili - Iimbali ezimbalwa ze-Forex zorhwebo; kuxoxwa kunye ne-debunked - Icandelo 1
Eli qela licinga ukuba linokugqithisa kakhulu kwaye likholisa kwaye ngamanye amaxesha, ukuba abathathi-nxaxheba abaneleyo bayakuxhasa ingcamango ethile, okanye baxhaswe ngabanikeli abathile abanegunya ukuba benze njalo, ngoko unokuxolelwa ngokukholelwa ukuba umnyama ubumhlophe kwaye uphantsi. Ukuba umntu uzama ukubhukuda ngokubhekiselele kumzila weengcamango, nokuba ngaba kunene, ziyakwazi ukudibana ne-volley ye-invective, ingakumbi ukuba intsha kwingxoxo.
Izibhengezo zibaluleke ngaphezu kokuphuma, okanye ngokulandelana
Abathengisi be-Novice baya kulungiswa kwisicwangciso sabo sokungena, mhlawumbi kuya kuba yintlangano yezibonakaliso zobuchwepheshe, xa zilungelelanisa ngokubumbeneyo, zivelise uphawu olugqibeleleyo ukungena. Ngoko kwenzeka ntoni emva koko? Uphuma nini, ixabiso lakho lijoliswe kuyo, yintoni umngcipheko owathathayo ngeyorhwebo nganye / ubeka kuphi na?
Nabani na onokutsalathisa kwinkokheli yangoku yomncintiswano, akukho mntu unanoma yimuphi umgangatho wokuqinisekiswa, unokuqikelela ukuba ngubani oza kuphumelela umqhubi xa kufikelelwe isigxina. Ukuphuma kwinqanaba elilinganayo ngokubaluleka nokuphuma, elikwahlula ngokulinganayo kunye nolawulo lwethu jikelele lwezorhwebo. Simele sibe nesizathu sokungena kwimarike kwaye kufuneka sibe nesizathu sokuphuma. Oko sikufumanayo kunokusenza siphume; uphawu lokungena luyafana (ngokuchasene) ukuya kumqondiso wokuphuma.
Akunakwenzeka ukuqikelela ukukhokelwa kwexabiso
Ewe kwaye hayi, ukuba iimarike zethu zangaphambili ziqikeleleke ngokuqinisekileyo ngoko kungayi kuba yimarike, kuya kuba yipompo yemali esinokuyivula okanye ukuyikhupha ngentando. Singazenza izigwebo ezinengqiqo esekelwe kulo, umzekelo, ubungqina bembali, iipateni zandwendwe zibonakaliswe kwiikhathi zethu, uhlalutyo oluphambili kunye nobugcisa. Ngokusekelwe kwezo zigwebo ezifanelekileyo kufuneka sikwazi ukuqonda apho ixabiso UCanzibe zihamba ngaphesheya kwexesha elide. Ubungqina bethu bokuba ixabiso liphi na, akufuneki ukuba libe yintengantye yemali, ingaxhomekeka kwizixhobo kunye nesayensi esitholakalayo kuthi.
Izinga eliphezulu lokuphumelela liqinisekisa ukuphumelela
Umlinganiselo wokuphumelela ophezulu awuguquleli ukuba ube yinzuzo, ukuba siphumelele ezintandathu kwiintengiso ezilishumi esithathayo, siphumelele ezintathu kwaye siphule enye, kodwa ilahleko zethu ziphindwe kabili okanye ngaphezulu, siza kuhamba kakuhle , okanye ulahlekelwe yimali. Njengoko kuthethwa ngamaxesha amaninzi; i-50: I-50 yokuphumelela / ukulahlekelwa kwentlawulo ingasebenza xa sithola, umzekelo, i-€ 200 kworhwebo ngalinye lokuphumelela, kodwa ilahlekelwa yi-€ 100 nganye kwi-trade.
Umvuzo ophezulu wokufumana umngcipheko uya kufumana inzuzo
Kufuneka siqaphele into enokwenzeka, into enokwenzeka kwaye yintoni engenakwenzeka kwaye yakha isicwangciso sethu ngokwezinto ezinjalo. Ukubambisa i-pair currency currency ukuhambisa i-1% ngosuku ayikho into eqhelekileyo. Kungenzeka kuphela kanye ngeveki; ngesiseko sokukhululwa kwekhalenda ekhoyo engekho okanye ukubetha ukubikezela, okanye umcimbi wezopolitiko ongaphandle. Ngoko ke, silindele ukuqhuba isicwangciso seshishini nganye ngosuku, ukuzuza kwi-1% yokunyuka kweemakethe xa sithengisa idilesi enye yemali, ngelixa isebenzisa kuphela ingozi ye-0.5%, ilindeleke kakhulu. Kufuneka sithengise ngokuziphatha kunye kwaye siyazi ukuba iimarike eziphezulu kunokuba zihamba, ngoko ke i-3% imakethe ihamba ngaphakathi mhlawumbi inyanga iya kuba yinto ebalulekileyo, ngoko sinokuzijonga ngengozi ye-1.5% yesayizi yethu ye-akhawunti ukuzama ukufumana i-3% ukukhula, okanye ngaba simele sengozi 1: 1?
Uvavanyo kuphela luza kubonakalisa izinga lethu lokuthuthuzela, kodwa kungabikho ubungqina obukhoyo ukuba umngcipheko omkhulu uya kuba nomvuzo olinganayo.
UKUKHONZISWA KWENKQUBO: ii-CFD zixhobo eziyinkimbinkimbi kwaye ziza neengozi enkulu yokulahlekelwa yimali ngokukhawuleza ngenxa yokunyusa. I-79% ye-akhawunti ye-investor account ilahlekelwa yimali xa ithengisa i-CFD kunye nalo mhlinzeki. Kufuneka uqwalasele ukuba uyaqonda ukuba iCFD isebenza njani nokuba unako ukufumana ingozi enkulu yokulahlekelwa yimali yakho. Nceda nqakraza Apha Ukufunda ukuValulwa kweengozi.